Usuku lapho umbulali aguqula ibala nobuzwe – Bayede News
Usuku lapho umbulali aguqula ibala nobuzwe
“SAWUBONA mnewethu!” Lawa kwaba ngamagama
Posted on 06/07/2019 by Bayede-News
Omunye osale enkundleni eChristchurch. Isithombe: AP Photo/Mark Baker
“SAWUBONA mnewethu!” Lawa kwaba ngamagama okugcina kaMnu uDaoud Nabi yena nabanye abangama-49 baqothwa ngenhlamvu. Kwabafayo omncane wabe eneminyaka emithathu igama lakhe kunguMucad Ibrahim owayehamba nomnewabo. Iminyaka yakhe ayimenzelanga ufefe.
Bonke laba abaqhothwa ngenhlamvu babesendaweni yokuthula neyo kukhonza edolobheni laseNew Zealand iChristchurch. Kulo muga kukhona okwabe kungejwayelekile; indlela yokubulala kanye nohlobo lombulali. Loyo osebekwe icala lokubulala uMnu uBrenton Tarrant wangena ngenhlokohlela yomshini ozishitshayo. Akangenanga nebhomu kepha inzondo ayenayo ngabenkolo yobuSulumane yaba yibhomu elabhubhisa phakathi kokunye imfundisoze ngohlobo lombulali okumele izwe nezizwe zimesabe.
Umufi uMucad Ibrahim
Ekuqaleni le mfundisoze yabe ithi kumele kusatshwe owenkolo yobuSulumane, ovathe ngezivatho ezithize nokhuluma ulimi oluthile okungesona isiNgisi. Nembala abaphehli bale mfundisoze baqhamuka nesithombe sombulali nezinhlangano angatholakala kuzo okwabe kuyi-Islamic State, iTaliban, i-Al-Shabaab, yiBoko Haram, i-Al-Qaeda. Yebo lezi zinhlangano zinezidumbu phansi, amakhulu azo kepha isithombe esabe singelona iqiniso ngesokuthi yizo zodwa eziyingozi.
Okwenzeke eNew Zealand kwenze amazwe amaningi entshonalanga ama ngankomo aqinisa izinhlelo zawo zobunhloli ngoba sekukhona ukwamukela ukuthi isitha akusesona kuphela esingophumasilwe bamaSulumane kepha nontamolukhuni emazweni abo. Ukwesabela okufanayo nokwenzeke eNew Zealand sekwenze amazwe esebenza ngezinhloli aba nokuxhumana ngenhloso yokucobelelana ngolwazi ngokwanda kontamolukhunu. E-United States of America (USA) ontamolukhuni laba kuthiwa inzondo yabo imvamisa bayibhekisa kwaboHlanga, amaSulumane kanye nalabo abathandana nobulili obufanayo. Kanti emazweni ase-Europe inzondo ibheke kubabaleki oningi labo liqhamuka emazweni abuswa ngenkolo yobuSulumane.
Umufi uDaoud Nabi
Ongoti ezikhungweni zemfundo, kwangqondonkulu sebeqalile ukuqhamuka nocwaningo ngokusabalala kontamolukhuni nezizathu ezenza benze lokhu abakwenzayo. Okukhulu abakuvezayo kulezi zifundo wukuthi ontamolukhuni laba bawumphumela wokwesaba uguquko. Yebo nenzondo yabokufika kuthiwa iseqhulwini. Ephawula ngalesi simo uSolwazi uTim McGettigan woPhiko lweSocialogy eColorado State University, nongumbhali webhuku i- A formula for Eradicating Racism , uthi i-USA yakhiwele phezu kwesisekelo sobuqhude kwabamhlophe nokwenza kube lula ukusabalala kwezimfundiso zontamolukhuni: “Udlame lwangomhla zili-12 kuNcwaba eCharlottesville lukhombisa ukuthi abahambisana nokuqonelwa ngabamhlophe baqhamuka kwelinye iqembu thizeni. Esikhathini esingamakhulunyaka amaningi, abahambisana nokuqonelwa ngabamhlophe e-USA nasemhlabeni jikelele bakholelwe odlameni ukuze babhebhethekise bafafaze okuyinzondo yabo.
Omunye umbhali kuleli bhuku uSolwazi u-Earl Smith uyafakaza uthi futhi ngiyachaza ukuthi ukuqonela kwabamhlophe kuzinze e-USA ngaphezu kokuqonda kwezakhamuzi zayo. “Kubuhlungu kunjalo ukuvuma, i-USA yabunjwa njengezwe labamhlophe abaqonelayo. Ake udlulise amehlo emifanekisweni yalabo abaqala (Founding Fathers) i-USA nalapho obona kahle khona izimpande zedemokhrasi yokuqonela kwabamhlophe. Ngesikhathi abaqala i-USA bakha uMthethosisekelo abazange bafune uvo lwabesifazane noma lwabanye abangemhlophe: ngesikhathi usasungulwa, idemokhrasi yase-USA yayiliqembu labesilisa abamhlophe kuphela. Kuze kube namuhla izinsalela zalokhu zilokhu zibonakala emakhasini oMthethosisekelo wase-USA. Iyini iThree-Fifths Compromise uma kungesisona isibopho sokuqonela kwabamhlophe?” kubuza yena.
Uma ucwaningo nokwenzeka emphakathini kuliqiniso kukhomba khona ukuthi kukhona okusina kujeqeza amazwe amaningi nokungathi uma kunganqandwa kucijise imikhonto emiphakathini eyahlukene. Kubuya indulo lapho ukwehluka ngokwemibono, ubuzwe nenkolo kwakusho ukuchitheka kwegazi. Okwamanje umhlaba usabona isithombe esisha sombulali, mhlophe, ungowasentshonalanga uthukile futhi udiniwe, umi ngomumo ukubhubhisa konke okuphambi kwakhe.